BARADHADA KIWI: TAFAASIISHA KALA DUWAN IYO SIFOOYINKA - BARADHADA
Tilmaanta, dabeecadaha iyo sifooyinka beeritaanka baradhada kala duwan ee Kiwi
Kiwi baradho Kiwi waa mid ka mid ah rarest, taas oo ay kala soocaan qaabka aan caadi ahayn ee dalagyada xididka iyo qaabdhismeedka sirta. Kala duwanaantan badanaaba laga helo dukaamada iyo safafka dalalka CIS, sidaas darteed badi bannaanka u leh isaga oo aan la aqoon. Si kastaba ha ahaatee, Fiisooyinka fara badan ayaa jecel baradhada Kiwi si ay u xoojiso tiknoolojiyada beeraha iyo waxsoosaarka gaarka ah. Sidaas, ka mid ah baadiyaha baradho ah waxay soo ururin karaan qiyaastii nus baaldi dalagyada xididka ah. Hoos waxaa ku qoran sharaxaad kala duwan ee baradhada Qiwi, iyo sidoo kale mabaadi'da aasaasiga ah ee beerahooda.
Ma taqaanaa? Kala duwanaanshaha waxaa loo yaqaan Kiwi sababtoo ah qaab dhismeedka qoyan iyo dhirta gaarka ah ee diirka iyo qaabka wareegga ah ee midhaha, taas oo ka dhigaysa khudradda u eg sida miro khafiif ah kiwi. Kala duwan ayaa waxaa lagu soo boodhay by hiwaayadda hiwaayadda ee magaalada Juk, Gobolka Kaluga, Russia.
Kiwi baradhada: GMO ama maya?
Beeralayaal badan oo hiwaayad ah waxay tixgeliyaan noocyada kala duwan ee Kiwi inay noqdaan Belarusian, tan iyo markii ay u muuqatay inay la mid yihiin Lasok, Temp iyo Belarusian-3 noocyo. Si kastaba ha ahaatee, kuwan waa uun xanta, iyo, dhab ahaantii, waxay yihiin noocyo gebi ahaanba kala duwan. Sababtoo ah xaqiiqda ah in ay jiraan macluumaad yar oo ku saabsan baradhada Kiwi, bannaanka qaar ayaa weli ku doodaya in khudraddaas ay tahay mid ammaan ah iyo haddii ay tahay GMO - waa unugyada hidde-abuurka ah. Waxaa jira ra'yi ah in marar kala duwan oo aan waxyeello soo gaadhin laalaabkii baradhada ee Colorado, macnaheedu waa in bakteeriyada cadowga cayayaankaan lagu soo bandhigay genehiisa. Si kastaba ha noqotee, tiknoolijiyadaan waxaa loo tixgeliyaa mudo dheer.
Sababta ah ee baradhada Baradho Colorado ma weeraraan noocyada Qiwi waa joogitaanka bio-cellulose ee ay ka kooban (protein khudradda ka cabsi ah cayayaanka), kaas oo ku dhuftay caleemaha dhirta iyadoo la isticmaalayo habka caadiga ah ee loo yaqaan. Iyo tayada kordhay ee diirka waxay muujinaysaa natiijada taranka dhaqameedka iyo qulqulka bayoolojiga, oo aan faragalin ku samayn qaabdhismeedka hidaha. Sidaa darteed, baradhada Kiwi waxaa loo tixgeliyaa noocyo kala duwan.
Baradhada Kiwi: sifooyinka iyo sharaxaadda kala duwanaanta
Kiwi kala duwan waa mid ka mid ah noocyada baradho ee ugu wanaagsan marka loo eego dhalidda. Kala duwanaansho, muddadii Bisaylkiisa - illaa 120 maalmood, iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada iyo cimilada. Heerka qoyaanku wuxuu leeyahay saameyn aad u weyn: isla gobolka, oo leh beeritaanka isku midka ah, wakhtiga uu fulanayo wuu kala duwanaan karaa. Dhirta baradho waa sare, waxay gaari kartaa 40-80 cm, asliga ah waa mid toosan, oo leh tiro badan oo laamood oo badan. Caleemaha waa qallaf, timo, caleemo cagaaran oo midab leh, oo leh geeso cufan. Ubaxyada ee baradho waa lilac dhalaalaya. Digriiga baradhada ee Kiwi waa qaab aan caadi aheyn, qaabaysan, oo leh geeso wareegsan iyo maqaar mesh. Si aad u taabato xididada waa mid aad u adag, maqaarka waa dhuuban yahay. Jidhku waa baraf-caddaan, oo leh sariir wareeg ah, waa mid aad u cufan wuxuuna u baahan yahay daaweyn kulayl badan oo ka badan noocyo kale. Noocyo baradhada Qiwi waxay leedahay sifooyin kale oo kala duwan - digriiga mar walba waa weynaadaa ama dhexdhexaad ah, yar yari ma dhicin.
Qaababka lagu beero noocyo kala duwan oo baradho ah Qiwi
Noocyada Beeraha ee Kiwi waxay noqon karaan hab dhaqameed, sida noocyada kaleba. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira farsamooyin beerto oo kuu oggolaanaya inaad hesho dhalidda ugu sareysa. Tusaale ahaan, Fiisooyinka waxay ku talinayaan in laga beero dalagga Holland. Wixii baradhada Kiwi, waxay bixisaa mabaadi'da beeritaanka lagu sharxay hoos.
Waqtiga loo beerayo gobollada cimilada cimilada - dabayaaqadii Abriil - bilawg May. Way fiicantahay marka dhulka uu kululaado + 7 ... +9 ° C qoto dheer oo ku saabsan 10-12 cm oo marka uu dhaxan yahay cabsi la'aan, maadaama ay waxyeelleynayaan goosashada mustaqbalka.
Xeerarka dejinta: meel, qorshe, tignoolaji
Tilmaaminta noocyada kala duwan sidoo kale waa in xaqiiqda ah in aan la beeray abuurka: alaabta wanaagsan ee abuurka for baradho Kiwi waa digriiga qallajiyey. Dhaqanka wuxuu jecel yahay qorraxda, meelaha ceelka ku wanaagsan iyo carrada bacrin ah, taas oo si toos ah u saameyneysa qiyaasta dalagga. Bariiska ugu firfircoon ee sii kordhaya ee carrada ciidda, taas oo loo diyaar garoobo beerto ee September. Si arrintan loo sameeyo, lakabka ugu sareeya ee dhulku waa la jiidaa qoto dheer oo ah 18 cm, ka dib marka cayayaanka la isticmaalo. Ku habboon quudinta fosoorka iyo potassium. Si ay baradho u noqoto mid hodan ah, waxaad isticmaali kartaa Bacriminta nitrogen. Markii ugu horeysay ee la sameeyo dayrta, iyo labaad - horraantii May. Ka hor inta beerto, ciidda waa in laga saaraa haramaha iyo dib-u-furidda. Nidaamka beeritaanka baradhada Qiwi ee habka Nederlandka waxay bixisaa sifooyinka noocaas ah:
laba xabbadood oo baradho ah - faraqa - laba saf - faraqa. Masaafada u dhaxaysa sariiraha waa inay ahaataa ugu yaraan 70 cm Tani waa lagama maarmaan si loo xaqiijiyo suurtagalnimada qalabka daryeelka beerta yar.
masaafada u dhexeysa beerto waa inay ahaataa ugu yaraan 30 cm;
Digriiga digriiga ah lama boobin, oo dhulka loogu daboolo labada dhinacba.
Haddii dhamaan talooyinka agrotechnik ah lagu arkay, habkan beeritaanka wuxuu u oggolaanayaa inuu ururiyo dhalidda ugu badan: qiyaastii 2 kg oo baradho ah oo ka yimaada hal baadiyaha.
Waa muhiim! Qoto dheer ee digriiga beerto waxay ku xiran tahay nooca carrada. In loamy, waxay ku filnaan doontaa in la qotomiyo qalabka beerto 5-8 cm, soddon iyo podzolic - waxaad u baahan tahay ugu yaraan 10 cm. Meel qoto dheer waxaa lagu xisaabiyaa dusha sare ee wax beerto ilaa sare ee godka.
Sida loo soosaaro noocyo baradho ah ee Kiwi: isdhexgalka daryeelka
Potato Kiwi waa wax aan qabyo ahayn oo sii kordhaya. Sidaa darteed, ninkii beerta ku shaqeeyaa oo idil wuxuu awood u yeelan doonaa inuu kobciyo noocyada kala duwan ee qorshihiisa. Wixii xagaaga oo dhan, sariiraha waxaa la waraabiyaa saddex jeer. Sidoo kale samee ciidda xilliga gaaban iyo jaridda dhirta. Bacriminta leh Bacriminta macdanta macdanta waxaa la fuliyaa saddex jeer: markii ugu horeysay ee bilowga xagaaga, labaad iyo saddexaad - oo leh mudo toban maalmood ah.
Kala duwanaanshaha iskudhaca cudurada iyo cayayaanka
Baradhada Kiwi waxay leedahay qaab kale oo kala duwan oo sharaxaad ka bixinaya noocyada kala duwan - iska caabida cayayaanka. The baradho Baradho Colorado iyo wireworm ku dhowaad marna weerarto caleemaha yar yar iyo caleemaha baradho. Sida kor ku xusan, sababta ugu horeysa ee tani waa joogitaanka caleemaha noocyada kala duwan ee bio-cellulose, taas oo aan la dhigi cayayaanka. Sababta labaad waxay tahay in noocyada Kiwi uu leeyahay caleemo aad u adag oo adag, taas oo ka ilaalisa cayayaanka waxayna keeneysaa in aan la dhigin ukumaha. Intaa waxaa dheer, kala duwanaantan saameyn kuma leh dabaylo goor dambe, qolof, macrosporosis iyo cudurrada kale ee fayraska.
Baradhada Kiwi: Dhiigbaxa
Qiimaha noocyada kala duwan waa dhalidda sare, taas oo ah 20 kg 1 kg ee digriiga beerto. Maadaama baradhada Kiwi ay dib u dhacdo, goosashada waxaa badanaa la qabtaa dhammaadkii Sebtembar - horraantii Oktoobar. Dhalxumo qoyan oo baradho ah - calaamad muujinaysa in ay tahay wakhtigii beergooyska. Sidoo kale, si aad u ogaato haddii xididdadu ay kobcaan, waxaad baadhi kartaa hal baadiyaha kormeerka. Dhammaan baradho la kariyay ayaa marka hore la qalajiyey, ka dibna la qaadaa, laga qaadaa haddii loo baahdo cayayaanka oo loo diro maqaasiinka ama meel kale oo qabow loogu talagalay kaydinta.
Sidaa darteed, sabab u ah sifooyinka gaarka ah ee sharaxaad kala duwan, Kiwi baradho helay helay badan oo jawaab celin wanaagsan ee bannaanka u si joogto ah u koraan on sirqoolladooda. Iyada oo dhammaan faa'iidooyinka, baradhada Kiwi weli waxay leeyihiin heer aad u sarreeya tayada ilaalinta waxaana lagu kaydiyaa waqti dheer iyada oo aan luminin muuqaalkooda asalka ah iyo dhadhanka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Baradhada 2020